H&M maketeni ausingakwanise kupotsa chirimo chino | Bezzia
Takasvika panguva iyoyo yegore apo zvipfeko zvine mitsipa yakawanda uye apo ganda rinonyanya protagonist. Nokudaro, inozadzisa muchimiro che maketani akafanana neaya ane H&M. Nekuti mwaka uno vanotora zvakawanda, saka haugone kuramba zvese zvatakakugadzirira.
Muunganidzwa wemazano uye kupedzisa izvo zvinopa hupenyu kutaridzika kwako kwakanaka. Yasvika nguva yekuti bheja papfungwa dzepakutanga uye kuunza kuravira kwedu kwakanakisa. Nenzira iyi, kutaridzika kwega kwega kwatinopfeka kunopawo kubata kwemunhu kwatinoda zvakanyanya. Iwe unongofanirwa kusarudza yako yaunofarira dhizaini.
1 Mitsipa mitatu-mitsipa paH&M
2 Necklace yegoridhe ine maruva maduku
3 Triple kiyi uye padlock pendant
4 'Best Friends' pendant
5 pearl necklaces
Mitsipa mitatu-mitsipa paH&M
Imwe yemaitiro makuru emwaka ndeyeiyi. Iketani ine mitsara mitatu.. Nekuti kusanganisa pendants inogara iri imwe nzira yakanaka yekupa humwe hunhu kune yega yega kutaridzika kwatinopfeka. Asi muchiitiko ichi, kusanganiswa uku hakudiwi nekuti necklace ine majana matatu pamwechete. Saka, mumwe nomumwe ane magumo anokosha. Iyo yakareba inoumbwa necheni yakanaka kwazvo ine menduru diki. Nepo mune yechipiri tinowana akatevedzana mabhora madiki anoishongedza kuti apedze neketani yezvisungo zvakakura. Pasina kupokana, inopfuura yakakwana sarudzo yekupa mavambo kune yedu maitiro.
Necklace yegoridhe ine maruva maduku
Zvinoita sekuti kubata kwegoridhe ndeimwe yevatambi vakuru vemwaka. Kunyangwe kana iwe uchida sirivha, iwe unenge uinewo macheni ako ane kupera ikoko. Parizvino tinogara nevekutanga asi muchimiro chechoki. Imwe yezvakakosha sarudzo kana tichitaura nezve accessories. Saka, hapana chakafanana nekushongedza mutsipa nekupenya kwegoridhe uye kupedzisa nekutevedzana kwezvimedu zviduku semaruva. Iyo yakanyanya kunaka chimiro ichave iyo inoperekedza iwe nekuda kwezano rakadai. Yakakwana kune mabhurauzi ako asiwo kune akawanda madhirezi ezhizha.
Triple kiyi uye padlock pendant
Isu tinoenderera neruvara rwegoridhe uye neimwe yeaya mapedzi atinoda. Ndiyo katatu mhedzisiro iripo zvakare. Kunyangwe mune iyi kesi, isu takaona kuti cheni pachadzo dzinobva kune dzakanyanya hukama kune mamwe emhando yakakomberedzwa, ari ekutanga. Asi nokuda kwekutanga, tine zvese kiyi nekiyi. Mbiri mbiri dzakakwana dzatinotoziva dzinonyatsoenderana uye zvino ivo vanozozviita zvakatowanda pamitsipa yedu.
'Best Friends' pendant
Kana iwe uchida kuita chipo chakanaka chezhizha chichagara kwehupenyu hwose, saka iwe une imwe yehuro yauchazodawo, uye yakawanda. Nokuti kuva neshamwari dzakanaka nguva dzose kunokosha muupenyu hwedu. Saka, kana isu tichigonawo kugara takapfeka semutero pamutsipa wedu, kunyangwe zvirinani. Iyo pendant ine moyo wakanaka apo mazwi ekuti 'Best Friends' ndiwo ma protagonists zvakafanana. Saka, iwe unogona kupfeka imwe uye iyo shamwari yepamoyo kana shamwari, imwe bato. Ngazvicherechedzwe kuti munogoverana manzwiro mamwe chete!
Zvinoita sekuti tiri kutaura nezvemitsipa mitatu zvakare, maviri acho akafanana asi yechitatu ichava pfungwa nyowani yauchazoda zvakanyanya. Nokuti kunze kwekuti izvo zviviri zvakafanana zvinoumbwa nemoyo wakaputsika uye uzere ne zircon, maonero anoenda kune chechitatu mukusawirirana ndiko. yakagadzirwa nenhevedzano yemaparera maduku. Pasina kupokana, vanhu ndeimwe yeakanakisa sarudzo uye sezvatinoona, haina kumbobuda muchimiro. Saka tinofanira kuafunga. Chimiro uye chepakutanga chichapenya kubva pamutsipa wako. Ndechipi chenecklace chaunoda zvakanyanya?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » fashoni » Complements » musanganiswa weH&M maketeni ausingakwanise kupotsa